राेचक Archives - News 88 Post
काठमाडाैं । केटाबाट केटी बनेकी अनिता चौधरीलाई आइमाईहरुले नै कस्तो छ देखाउन भन्ने गर्छन्केटाबाट केटि बनेकी अनिता चौधरीलाई आइमाईहरुले नै कस्तो छ देखाउन भन्ने गर्छन् हामीले कहिलेकाही सुन्ने गरेका छौ अहिले लिङ्ग परिवर्तनको कुरा । तर यो वास्तवमा नै भएको छ दाङ जिलाकी अनिता चौधरीको जीवनमा । पहिले शंकर चौधरी अहिले अनिता चौधरी भएकी छिन […]
यस्तो छ नेपाली युवाले बनाएको ब्याकगियरसहितकाे विद्युतीय मोटरसाइकल
November 27, 2021 N88LeaveaComment on यस्तो छ नेपाली युवाले बनाएको ब्याकगियरसहितकाे विद्युतीय मोटरसाइकल
बुटवल । बुटवलको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएका छन् । कक्षा १२ मा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययरत विद्यार्थी सागर पोखरेलले निर्माण गरेको ब्याक गियरसहितको इलेक्ट्रो एमएएसबी विद्युतीय मोटरसाइकल सोमबार प्रदर्शन गरिएको छ । परिसरमा मोटरसाइकलको परीक्षण गरिनाका साथै पोखरेललाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नगद ५१ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेको छ । […]
चितवनमा इतिहासमै सवैभन्दा वढि गर्भनिरोधक अस्थायी साधनको माग
November 27, 2021 November 27, 2021 N88LeaveaComment on चितवनमा इतिहासमै सवैभन्दा वढि गर्भनिरोधक अस्थायी साधनको माग
चितवन । नेकपा एमालेको महाधिवेशनका कारण चितवनमा गर्भनिरोधक अस्थायी साधनको बिक्री बढेको छ । बजार क्षेत्रका औषधी पसल, अस्पताल रोडका नीजि अस्पतालहरुमा अस्थायी साधन खरिदविक्रि वढेको वताईएको छ। अप्रत्यासित रुपमा अस्धायी साधनको माग वढेपछि औषधी ब्यवसायीहरु आस्चर्यमा परेका छन् । यसअघि समान्य रुपमा माग हुने अस्थायी साधनको माग वढेपछि औषधी पसलदेखि पान पसल, केहि होटलको काउन्टर […]
पाइलटका अनेक चर्तिकला, उडीरहेको जहाजमा म’दि’रापा’नदेखि ककपीटमै यौ’न स’म्प’र्कसम्म
November 24, 2021 N88LeaveaComment on पाइलटका अनेक चर्तिकला, उडीरहेको जहाजमा म’दि’रापा’नदेखि ककपीटमै यौ’न स’म्प’र्कसम्म
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेन पेम्बा शेर्पा चर्चामा छन् । त्रिभुवन विमानस्थलबाट रूकुमका लागि उडेको जहाज उनले नेपालगञ्जमै अवतरण गराएपछि पाइलटको भूमिकाबारे नेपालमा बहस प्रारम्भ भएको छ । सोमबार ३ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट आठ जना यात्रुसहितको ट्वीनअटर विमान रूकुमका लागि उडेको थियो । क्याप्टेन शेर्पाको डयूटी ४ बजे सकिन्थ्यो, जतिबेला उनी आकाशमै थिए । उनलाई […]
नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीश भारतमा यसरी बिताउँदैछन् सन्यासी जीवन
November 16, 2021 N88LeaveaComment on नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीश भारतमा यसरी बिताउँदैछन् सन्यासी जीवन
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेका एक जना व्यक्ति यतिबेला भारतका सन्यासी जीवन बिताइरहेको सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा यतिबेला भारतमा सन्यासी जीवन बिताइरहेका छन्। २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेर गएपछि न्यायालयको बागडोर दामोदर शर्माले सम्हालेका थिए। उनकै नेतृत्वको न्यायपरिषदले वर्तामान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो। शर्मा […]
आमाले सहकारीबाट लिएको ऋ’ण उठाउन जान्थे यी युवक जब छोरी नै मन परेपछि भयो यस्तो ….
November 15, 2021 N88LeaveaComment on आमाले सहकारीबाट लिएको ऋ’ण उठाउन जान्थे यी युवक जब छोरी नै मन परेपछि भयो यस्तो ….
एजेन्सी । प्रेमलाई केहीलाई रोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण एक जोडीले प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुको पहिलो भेट पनि अचम्म तरीकाले भएको थियो । यो घट;ना भारतको हो । बिहारको राजधानी पटनामा झारखण्डकी एक केटी र झारखण्डका एक केटाले विवाह गरेका छन् । पटनाको फुलवारी शरीफ थानाका प्रहरीहरूले यो मा’यालु जोडीलाई विवाह गराए । केटा झारखण्डको […]
केटाबाट केटी बनेकी अनिता चौधरीलाई आइमाईहरुले नै भन्छन्, ‘पिसाब फेर्ने ठाउँ कस्तो छ देखाउन’ (भिडियोसहित)
November 15, 2021 November 15, 2021 N88LeaveaComment on केटाबाट केटी बनेकी अनिता चौधरीलाई आइमाईहरुले नै भन्छन्, ‘पिसाब फेर्ने ठाउँ कस्तो छ देखाउन’ (भिडियोसहित)
हामीले कहिलेकाही सुन्ने गरेका छौ अहिले लिङ्ग परिवर्तनको कुरा । तर यो वास्तवमा नै भएको छ दाङ जिलाकी अनिता चौधरीको जीवनमा । पहिले शंकर चौधरी अहिले अनिता चौधरी भएकी छिन । आफू पहिले केटा नै जन्मिएको उनको भनाई छ । काठमाडौ बस्दै आएकी अनिता तिहार मनाउनका लागि दाङ आएको बेला उनिसगँ कुराकानी भएको हो । […]
यस्तो पनि ठाउँ जहाँ महिनावारी हुँदा उत्सव मनाइन्छ
November 15, 2021 N88LeaveaComment on यस्तो पनि ठाउँ जहाँ महिनावारी हुँदा उत्सव मनाइन्छ
एजेन्सी । शिर्षक पढ्दा झट्ट विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । तर यो वास्तविकता हो । त्यो पनि हाम्रै छिमेकी मूलुक भारतको कुरा हो । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार पहिलो पटक महिनावारी हुँदा भारतका केही स्थानमा महिनावारी हुने ती बालिकाहरुको आरती उतार्ने गरिन्छ । हुन त महिनावारी एक प्राकृतिक प्रकृया हो । तर ठाउँ अनुसार यसप्रतिको […]